Gary Neville oo saadaaliyey Kooxda Premier League ololahan ku guuleysan doonta iyo afarta sare ee jadwalka……Yaa ka maqan? – Gool FM
Gary Neville oo saadaaliyey Kooxda Premier League ololahan ku guuleysan doonta iyo afarta sare ee jadwalka……Yaa ka maqan?
Kaafi August 11, 2016
(London) 11 Agoosto 2016. Halyeygii hore ee Manchester United Gary Neville ayaa sheegay in Manchester United ay Xilli Ciyaareedkan qaadi karto Premier League.
Dambeedkii hore ee England waxa uu saadaaliyey afarta ugu sarreyn doontaa Premier League ololaha 2016-17 laakiin waxa uu ka gaabsaday sida ay kula korreyn doonaan.
Kaddib, Arsenal waxaa uu sheegay in ay saddexda kaalin ee soo hartay ay buuxin donaan Arsenal Wenger oo booska labaad ku dhameysan doona halka Liverpool iyo Mancehster City ay iyana u soo bixi doonaan Champions League.
Neviile waxa uu meesha ka saaray Antonio Conte walow uu qiray in taasi uu ku qaldami karo.
‘Aniga run ahaantii waan ku wareersanahay waxa dhici kara – waxaan qabaa in ay qof walba sidaas yahay – ma aha wax xun,” ayuu u sheegay Sky Sports.
‘Muddo 20 sano ah waan saadaalin karnay waxa dhici karay kahor inta aan Kubadda xitaa la baasan, laakiin waqti xaadirkan ma garanneyno.
‘Waxaan horyaalka u saadaalinayaa Manchester United, Arsenal laba, Mancehster City iyo Liverpool saddex iyo afraad.
‘Laakiin hadii qof uu arintan ka fekerayo iyo wax yaabaha aan aqaan oo aan ka hadlayo, markaa waxaan rabaa in aan cadeeyo xaqiiqdii in aan fikir ka haysan.
‘Qof walba waxa uu fiirinayaa Manchester marka la eego labada tababare ee yimid iyo lacagaha la qarsha gareeyey.
‘Sidee ayuu Guardiola ula qabsan doonaa oo uu u kabi doonaa safka? Dhawrkii sano ee dambe, City waxa ay ahayd kuwo aan la’isku haleyn karin mararka qaar waxa ayna u baahan yihiin gabi’aahaanba in ay maskaxdooda badelaan.
‘Waxaan ka tagay Chelsea waana halis maxaa yeelay waa ciyaaryahano khibrad leh oo wada joogay waxaana wada Antonio Conte kaas oo jeclaan doonaa Ciyaryahano badan oo safka ka tirsan.”
Demba Ba oo ka soo kabanaya dhaawicii jabka ahaa ee lugta ka gaaray, isagoo tababar gaaban samaynaya... (Muuqaal + Sawirro)